2011-2018 Dodge Charger Uconnect 5-Inch 5R Protector Protector 2011-2018 Dodge Charger Njikọ 5-Inch 5R Nche Nche Ndo - LFOTPP
Home ngwaahịa 2011-2018 Dodge Charger Uconnect 5-Inch 5R Protector Protector
2011-2018 Dodge Charger Uconnect 5-Inch 5R Protector Protector
X 9H Na-agbanye Sreen: Chebe ihuenyo gị site na Icha, Ọgbawa na Debris
◯ Ibelata anya ike gị
金 Na-egbochi mkpịsị aka na-eme ka ihuenyo dị
• Nchebe dị elu: 9H Hardness na 0.25mm Ọkpụkpụ, iko mkpuchi a nọgidere na-enwe mmetụta aka nke onye ọkwọ ụgbọ ala gị mgbe ị na-ahụ ka ị na-enwe mmetụta dị mma nke na-emetụ n'ahụ, Mgbochi-Ọkụ & Ihe Ngbawa.
• Mpụpụ na anya visuals: Ịwụnye mkpuchi ihu agaghị emetụta agba, akara ngosi na ihuenyo mmetụ nke ngosipụta GPS gị. Ọ ga-eme ka ọ ghara ịdị ọcha n'ájá, ncha, mmanụ, mmiri na mkpịsị aka, wdg.
• Enweghi mpempe akwụkwọ mkpịsị aka: Ejiri ya na mkpuchi nkuzi nke na-eme ka mmanụ kwụsị site na mkpịsị aka gị ma na-agbakwụnyekwu ihe dị mma na ihuenyo nchọgharị.
• Mpekere laser maka nkwekọrịta kwesịrị ekwesị: Ọ dịghị mkpa ka ị belata ọnụ ya, ebe ọ bụ dakọtara.
• Nwee mgbapụta na-enweghị ihe ọ bụla: Iji chebe ihuenyo GPS gị n'enweghị ntụpọ, kpochapụ ya na ákwà microfiber. Ọ dịghị mkpa iji ihe mkpocha ndị na-emerụ emerụ.
Kedu ihe mere O ji dị mkpa ka ị wụnye Ngosipụta Ihuenyo Ihuenyo?
Anyị na-akwado ndị na-echebe mkpuchi ụgbọelu zuru ụwa ọnụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya, biko kpọtụrụ anyị.
Anyị nwere ike inye mkpesa.
Nzọụkwụ nhazi usoro
2011-2018 Dodge Charger Uconnect 8.4-Inch Screen Screen Protector
X 9H Na-agbanye Sreen: Na-echekwa ihuenyo gị site na Ọcha, Ngbawa na Debrisala Ebelata ike ike gị.
2011-2018 Dodge Charger Uconnect 7-Inch 5R Nlekọta Nchebe Ikuku